Dagaal u dhaxeeya Soomaalida & Booliska Toronto
Dagaal u dhaxeeya Soomaalida & Booliska Toronto ayaa Keenay Dhaawac labada dhinac ah. Dagaalkaas oo Bilawday Abaarihii 9:30PM Toronto, ayaa ka bilawday ka dib markii ay yimaadeen Seddex nin oo ka mid ah Booliska 12 division, loona yaqaan Dharcad goob Soomaalidu isugu tagto Habeenkii.
Booliskan oo Soomaalidu horey u tiqiin, ayaa keenay in markii ay yimaadeen ay halkaa ka bilaabeen Hanjabaad.
Cabdi Xaashi (Taargo) oo taagnaa irida laga galo goobta Soomaalidu ku jirtey ayey markiiba is qabteen, Dagaal ayaana dhex maray iyaga iyo Taargo, Soomaalidii Ku jirtey Gudaha ayaa markiiba ku soo baxday dagaalkii, Halkii ayuuna dagaalku ka sii weynaaday oo Seddexdii Booliska uu ka soo gaaray Dhaawac xun, sidoo kale qaar ka mid ah Soomaalida ayaa iyaguna dhaawac halkaa ka soo gaaray.
Baabuurkii Booliskana halkaas ayaa lagu Jajabiyey.
Markaa ka dib ayaa waxaa soo gaaray Ciidamo aad u badan oo Boolis ah oo ka socday 12 division , kuwaas oo isku dayey inay Xirxiraan Soomaali badan oo halkaa Joogtey balse waxaa ka dhacday in la ismari waayey, ugu dambeyntii Waxey Xireen Afar Soomaali ah oo uu ku jiro Taargo oo isagu si aad ah u dhaawacmay.
Iska hor imaadkaas oo socday ku dhawaad labo saacadood ayaan aheyn kii ugu horeeyey ee dhex mara Soomaalida & Booliska oo iyagu caadeystey inay Isbaaro u dhigtaan Soomaalida.iyaga oo markaa isticmaalaya awooda Booliska 12 division.
Mahad Yusuf (Afweyne) oo madax ka ah mid ka mid ah ururada Soomaalida ee ka jira Toronto iyo qaar ka mid hogaamiyayaasga bulshada Somaaliyeed ee Toronto ku nool ayaa ka qeyb galay wada hadalkii dhexmaray Hogaamiyayaasha Soomaalida & madaxda Saldhiggii (12 division) , halkaasna waxaa lagu guuleystey in Isbitaal loo qaado Taargo oo dhaawiciisu xumaa.
Booliiska ( 12 division) ayaa u sheegay qaar ka mid hogaamishaasha bulshada iyo qalabka warbaahinta in ay goobaayeen daroogada la yiraahdo (khaat) oo mamnuuc ka ah wadanka Canada laakiin aad looga isticmaalo wadamada bariga Afrika.
Detective Wayne Pates oo ka mid ah booliiska (12 division) ayaa sheegay in ka badan 50 Somali ah ayay soo weerareen ka dib markay isku dayeen in ay qabtaan nin ay ku tuhmeen in uu khaat gacanta ku haystay.
Ka bibna ay garaac iyo cay isku dareen , halkaas oo uu dhaawac ka soo gaaray qaar ka mid ah booliskii .
Waxaase qaar ka mid ah Somalidii halkaas joogtay ay sheegeen in dagaalku ay bilaabeen boliska oo xitaa ay si xun u dileen dad aan waxba galabsan iyo qaar rabay in ay u sheegeen nin cudur xun qabay oo ay si xun u garba duubeen.
Ilaa maanta la ma hubo xaalku meesha uu ku dambeeyay, laakiin mar aan telefoon kula hadalay Mahad Yusuf oo ka mid hogaamisyayaasha bulshada ee halkaas tagay ayaa ii sheegay in boliska ay balan qaadeen in la sii daayo (bail hearing) dadkii halkaas lagu xirriray , lana qaban doono balan kale oo maxkamadeed.